Uganda oo Martiqaad u fidisay Madaxweynayaasha Somalia Iyo Masar, maxaa loo casuumay? (Aqri) - Caasimada Online
Home Warar Uganda oo Martiqaad u fidisay Madaxweynayaasha Somalia Iyo Masar, maxaa loo casuumay?...
Uganda oo Martiqaad u fidisay Madaxweynayaasha Somalia Iyo Masar, maxaa loo casuumay? (Aqri)
Madaxweynayaasha cusub ee dalalka masar iyo Soomaaliya(Xasan Shiikh Maxamuud iyo Mohamed Mursi)ayay dowlada Uganda kumarti qaaday ineey kasoo qayb galaan xaflada golden jubilee.
Wasiirka warfafinta Uganda Karooro Okurut,ayaa talaadadii lasoo dhaafay waxa uu warqad casuumaad ah udiray madaxweynayaasha dhowaan loo doortay dalalka somalia iyo masar,sidoo kale waxaa xafladaan lagu casuumay 15madaxweyne oo kale.
Karooro Okurut,ayaa sidoo kale xafladaan golden jubilee waxa uu kumarti qaaday hay’ado caalami ah,sida QM,midowga yurub EU,ururka barwaaqo sooranka(Commonwealth),Bankiga horumarinta Afrika iyo hay’ado kalo caalami ah.
Hadii aan wax kaxusno madaxweynayaasha lagu marti qaaday xafladaan waxay kala yihiin:Rwanda, Tanzania, Burundi, Kenya, Somalia, Democratic Republic of Congo, South Sudan, Egypt, Somalia, Congo Brazzaville, Central African Republic, Malawi, Gambia, and Benin.
Xafladan ayaa ah mid laqabto hal mar sanadkiiba waana xaflad si aad ah loga yaqaano dalka Uganda.